10 / 09 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[22 / 09 / 2019] အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler! .. Mürselpaşa Boulevard အတွက်ယာဉ်အသွားအလာ Flow ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်	35 Izmir
[21 / 09 / 2019] ရထားပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာအင်စတီကျု Gebze ၌တည်လိမ့်ရန်	41 Kocaeli
[21 / 09 / 2019] TCDD 1 တစ်နှစ်တာအပြောင်းအလဲများပိုမိုလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများတိုးချဲ့	06 တူရကီ
[21 / 09 / 2019] Kocaeli ယနေ့ Start ကိုအချိန်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစေ၏အဖြစ်	41 Kocaeli
[21 / 09 / 2019] Akçaray, ကျောင်းသားမဲပေးသူခဲ့သည်	41 Kocaeli
နေ့: စက်တင်ဘာလ 10 2019
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်၌ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မြို့ထဲမှာနေထိုင်နိုင်ငံသားများ၏လေးထောင့်၌အလုပ်လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။ တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ် Project မှချုပ်ဝင်စက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေး Inc ၏သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများမြို့တော် (Bugsaş) [ပို ... ]
82 ကိုရီးယား (တောင်ပိုင်း)
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဒုတိယဝန်ကြီး Enver İskurtနှင့် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သော, ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နည်းပညာဆွေးနွေးဖို့တောင်ကိုရီးယားသွားရောက်ခဲ့ပြီး, အင်တာဗျူးနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့စီးရီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ İskurtနှင့်သင့်လျော်သော, [ပို ... ]
Gebze မြို့တော်ဝန်Büyükgöz Zinner, (TÜVASAŞ) တူရကီ Wagon Industries, Inc ကိုဒါရိုက်တာပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Ilhan Kocaarslan သူ့ရုံးခန်းထဲမှာဧည့်ခံ။ Gebze မြို့တော်ဝန်Büyükgöz Zinner, (TÜVASAŞ) တူရကီ Wagon Industries, Inc ကိုဒါရိုက်တာပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Ilhan Kocaarslan သူ့ရုံးခန်းထဲမှာဧည့်ခံ။ ခရီးစဉ် [ပို ... ]
ဧဒင်ဥယျာဉ် Corlu ရထားအဖြစ်ဆိုးကိစ္စတွင်အပေါ်စကားရပ်တုန်လှုပ်
Corlu 25 လူတွေကသူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရ, 328 1 Corlu လူတွေကို related တရားစွဲမှု၏ဒုတိယ session တစ်ခုရထားအဖြစ်ဆိုးအတွက်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအမြင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးကÇorluအရွယ်ရောက်ပညာရေးစင်တာတွင်တွေ့မြင်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ လမ်းလိုင်းစွပ်စွဲတီကောင် "အုပ်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ သူတို့ဘယ်မှာလဲ [ပို ... ]
Corlu ရထားမတော်တဆစမ်းသပ်စက်တင်ဘာလ 10 အတွက်စတင်!
Edirne, အစ္စတန်ဘူလ်၏Uzunköprüခရိုင် Halkalı'' Moving သို့မဟုတ်သွားကြဖို့အကြောင်း 3626ခရီးသည်နှင့်သူသည်ရထားလမ်းအနီးရှိရပ်ကွက်အတွင်းမှထွက်ခေါက်ခဲ့သည်Sarılarဇူလိုင်လ 8 2018 Tekirdag Corlu ခရိုင်အတွင်းခရီးသည်တင်မီးရထားပုဂ္ဂိုလ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ xnumx ရဲ့သားသမီးများ,7လူတွေကသူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရ, [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Mugla မိုဘိုင်းထဲတွင်မရှိတော့ပါ
Mugla တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မိုဘိုင်း app ကိုအတူဘတ်စ်ကားကဒ်ထဲကမိုဘိုင်းနိုင်ငံသားများစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖြစ်ပြီးနောက် 'Mugla စီးတီးကဒ်' 'စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Muğlaမြူနီစီပယ်, ဘတ်စ်ကားကဒ်အရောင်းအ, ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းမြေပုံ, ဒါMuğlaအတွက်အလွန်လူကြိုက်များရာအရပျ၏ကြေညာချက် [ပို ... ]
နယူးစက်ဘီးနှင့် Sakarya အတွက် Walking Paths မှနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမွို့၌စက်ဘီး၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုအသစ်လုပ်ဘဝကိုဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ နွေရာသီနှင့်အတူလမ်းဆုံအကြားတည်ဆောက်နေကြာချိုင့်စက်ဘီးအသစ်တခုလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးလမ်းကြောင်းဟာကတ္တရာအလုပျ၏ပြီးစီးနှင့်အတူအားကစားပရိသတ်တွေကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်စတင်ခဲ့သည်။ Sakarya တဲ့ Metropolitan [ပို ... ]
Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်စက်ဘီး Path ကိုပြုရမည်
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့် လုပ်. လုပ်ဖို့ Kayseri ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard လူသွားလူနှင့်စက်ဘီးလမ်းကြောင်း၏အရေးအပါဆုံးနညျးလမျးတစျခုဖွစျနပွေီသော နေ့မှစ. ဖွင့်လှစ်။ နေ့မှစ. ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းတော် Kayseri နှင့် Kayseri မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး [ပို ... ]
ပေးဖို့န်ကြီးဌာနက Metro ယာဉ်ဝယ် Konya 1 ၏ဘီလီယံအကူအညီပေးခြင်းကိုပြောင်းရွှေ့
Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Ugur အီဘရာဟင် Altai, အစည်းဝေးပွဲ Tayyip နိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep အစည်းအဝေးကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်အာဒိုဂန် Konya တှငျကငျြးပခဲ့ခံရဖို့, 2021 အစ္စလာမ့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အားကစားပြိုင်ပွဲ Konya Metro ပိုင်းတွင်နောက်ပိုင်းတွင်ယခုလတင်ဒါခံရသည့်ခရီးစဉ်၏သတငျးကောငျးပေးခဲ့တယ် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ် Halkalı Metro တူးဖော်မှုစတင်
အစ္စတန်ဘူလ်တူးဖော်လေဆိပ်သွားဖို့မြေအောက်ရထားဘို့ကစတင်ခဲ့သည်။ စက် 8 ရက်ပင် 64,5 တူးမည်အကွာအဝေးမီတာစံချိန်ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ လိုင်း 30 တူရကီပြန်တမ်းÇobanoğlu'nunသတင်းထံမှ Osman ... လအားဖြင့်ပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်; "အပြည့်အဝစွမ်းရည်မှာအလုပ်လုပ် start ကမ္ဘာ့သည့်အခါ [ပို ... ]
သမိုင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးတာရှုမွို့လမ်းမကြီးအလုပ်လုပ် Start ကို
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, တာရှုမွို့ခရိုငျ၏သမိုငျးတှငျအကြီးဆုံးလမ်းအကျင့်ကိုကျင့်တွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တာရှုမွို့-The-Böğrüeğrဒေသတွင်းလမ်းကြောင်းအတွက်ရပ်ကွက်နှင့်အခြားအုပ်စုများကိုဆက်သွယ်ကြောင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့ကြီးသောအရေးပါမှုရှိခြင်း၏ Boztepe ရပ်ကွက်, လမ်းဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ Maintenance ၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏Pirömerl [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ရွေးချယ်မှု: 'Mersin Metro မူရင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် Next ကိုခြေလှမ်းများ' '
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညီလာခံအစည်းအဝေးစက်တင်ဘာလ 1 ။ အဆိုပါမြို့တော်မြို့တော်ဝန်ရဲ့ Squad Hemant ကို Select လုပ်ပါမှာစကားပြောသော "မြေအောက်အလင်းရထားစနစ်အစစ်အမှန်အလုပ်ထို့နောက်" ဟုသူက Mersin မြေအောက် LRT ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏သမ္မတသက်တမ်းစောင့်စိတ်အားထက်သန်စွာကပြောပါတယ် [ပို ... ]
ဓါတ်ရထားတောင်တက် Eskisehir ပိုမိုမကြာခဏခဲ့ကြသည်
နိုင်ရန်အတွက်ပညာသင်နှစ်ရဲ့ start နှင့်အတူလမ်းရထားများ၏ပြင်းထန်မှုအတွက် 2019-2020 လျှော့ချရေးအတွက်လမ်းရထား ESTRADA အချိန်sıklaştırdı။ ငါ ESTRADA ပင်ပေါ်လာတာဟာအရင်71253 တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သီးခြားစီထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်, ဆောင်းရာသီစာသင်လေ့လာမှုအစီအစဉ်အကူးအပြောင်းကြေညာ။ ကျောင်းပိတ်ပစ်နှင့်အတူဇွန်လအတွက် 24 [ပို ... ]
Aktas ဦးပိုင်,6။ နယူးမျိုးဆက်မီးရထား Tteknoloji အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတက်ရောက်ရန်
အဆိုပါရထားလမ်းစနစ်ထုတ်လုပ်မှု Aktas ဦးပိုင်အတွက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများ, စက်မှုလုပ်ငန်းများကလုပ်အထူးသဖြင့်မကြာသေးခင်ကသိသိသာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအကြားတည်ရှိသော Air ကိုရပ်ဆိုင်းမှုစနစ်ကတဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာကိုက်ညီသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်နေရာတစ်နေရာယူနေဆဲဖြစ်သည်။ ရထားလမ်းစနစ်များအတွက်နှစ်ဦးစလုံး [ပို ... ]
Edirne အတွက်မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ၏ Eurasian Way ကို
Edirne မြို့တော်ဝန် Recep Gürkan, Eurasian လမ်း၏ပရိုမိုးရှင်းလှုပ်ရှားမှုများ Edirne တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ Edirne မြို့တော်ဝန် Recep Gürkan, Eurasian 18 စက်တင်ဘာလ 2019 မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလမ်းမကြီး 18 ၏ဗုဒ္ဓဟူးနေ့: Edirne မြူနီစီပယ်အဆောက်အအုံအတွက် 00 ခန်းမမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနှင့်ဥရောပအာရှတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
Gumushane တက္ကသိုလ်,7။ စံချိန်စံညွှန်းအပေါ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသင်တန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမူလစာမျက်နှာပိုင်ဆိုင်မှုကို
Kose နှစ်အရွယ် Irfan Can အသက်မွေးမှုကျောင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသင်း (လောဒမွို့) "ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပညာရေးစံချိန်စံညွှန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ xnumx'nc" ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ကျင်းပသည့်တစ်ဦးဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ကိုနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ ကျောင်းများနှင့်သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျောင်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူတူရကီအတွက်မဟာဌာန, [ပို ... ]
Corlu ရထားအဖွစျဆိုးကိစ္စ, ယနေ့ 600 နှစ်ချက်ဆွဲဆောင်မှုခန်းမထဲမှာ
နောက်ပိုင်းမှာTekirdağ၏တရားရုံးတွင်မိသားစုနှင့်ရှေ့နေများက '' အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသေး၏ '' ခန်းမအတွင်းပထမဆုံးကြားနာÇorluခရိုင်တရားစွဲဆိုမှု၏ပထမဆုံးကြားနာအကြောင်းကို faciayl သေးငယ်တဲ့ halls 25 လူတွေဒဏ်ရာရ, 328 ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအထဲမှာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ကိစ္စတွင်၎င်း၏ဆုတ်ခွာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် [ပို ... ]
rayhab 10.09.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာဖြစ်ပါသည်
ဘီးအစုံလောင်စာအလားတူမီးရထားသတင်းများဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီးအကျိုးစီးပွားအခြား haberlerrayhab မည်အကြောင်း (TÜDEMSAŞ) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 25.01.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ 25 / 01 / 2019 ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်bulunmamaktadırrayhab 25.01.2019 ရက်ပေါင်းမဆိုလေလံပွဲစံချိန်တင် 04.02.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ 04 / 02 / 2019 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ကို 04.02.2019 [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ulaşımpark Inc ကို 10 စက်တင်ဘာလ 18.30 Kocaelispor မှာအင်္ဂါနေ့မှာကစားပါလိမ့်မည် - Gölcüksporစိုက်ပျိုးရေး, တူရကီဖလား2။ အပိုဆောင်းဘတ်စ်ကားအဆိုပါခြေစစ်ပွဲပတ်ပတ်လည်ပွဲစဉ်ထဲသို့သွင်းထားခဲ့ကြသည်။ တစ်မြို့ဒါဘီပွဲစဉ်အဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်စည်းရုံးအဆိုပါဘတ်စ်ကား [ပို ... ]
ဆောင်းရာသီဇယားအတွက် Kocaeli ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လွန်
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကောက်အခွန်အတွက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလွန်။ Karamursel မယ်အကြား Degirmendere နှင့်သုံးမှလေးလက်ထက်ကာလ၌ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်တည်းဖြတ် - ခရီးသည်တင်မော်တော် Izmit အတွက်တောင်တက် (hatxnumx) - Golcuk ။ အခြားတစ်ဖက်နာရီတွင်သင်ကူးတို့လိုကျလြှောကျနိုငျ [ပို ... ]
နောက်တဖန်ပြုသောအမှုခံရဖို့ Karamursel Interchange တင်ဒါ
အတူတူအတူတူလမ်းလျှောက်ပါ, သူတို့ကİzmirlilerနင်း Translate ရှိ
အာရုံစူးစိုက်မှုİzmirliler! .. Mürselpaşa Boulevard အတွက်ယာဉ်အသွားအလာ Flow ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 22 1939 Sivas မီးရထားအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
အသုံးချနိုင်ရန် 2020 Elektra သည်အီလက်ထရောနစ် R & D Center မှာ
TCDD 1 တစ်နှစ်တာအပြောင်းအလဲများပိုမိုလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများတိုးချဲ့
Kocaeli ယနေ့ Start ကိုအချိန်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစေ၏အဖြစ်
Bilecik အတွက်မီးရထားမတော်တဆ4နှစ်အကြာဖျော်ဖြေသတိပေးချက်များတဖန်လစ်လျူရှုခဲ့ကြ
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်နဂါးလှေပွဲတော် Inter-Agency ကစိတ်လှုပ်ရှား
Havaist တောင်တက်နာရီ Havaist စခန်းများနှင့် Havaist စျေးစီမံကိန်းများကို
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: တူရကီနှင့်သြစတြီးယားအကြားစက်တင်ဘာလ 21 2006
ဂျပန် 27 နိုင်ငံဖုံးအုပ်စက်ဘီးခရီးစဉ်အားဖြင့်ရောက်ရှိ
Metro လိုင်း Goztepe Uskudar လေ့လာရေးပြန်လည်စတင်ပါ
အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာ Bilecik အတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ်အခမ်းအနားများတွင်သေဆုံးရထားမတော်တဆကြုံတွေ့
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (399) သြဂုတ်လ 2019 (506) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
Konya Metro တင်ပြ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Aselsan ရထားစနစ်များတင်ပြ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား YHT တင်ပြ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
တူရကီစီစဉ်ထား Metro နှင့်အခြား Mass Transit Lines - rayhab ဖြစ်ပါသည်
စီစဉ်ထားတူရကီက Metro လိုင်း - rayhab ဖြစ်ပါသည်
တူရကီ Esenboga လေဆိပ်မှာ Metro တင်ပြ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
M8 Dudullu အစ္စတန်ဘူလ် Bostanci Metro တင်ပြ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
M12 အစ္စတန်ဘူလ်Göztepe Flat Umraniye Metro တင်ပြ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Marmaray Trailer (2017) - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Marmaray တင်ပြ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
တူရကီ၏ပြိုင်ပွဲအတွက် Ogier ရဲ့အောင်ပွဲ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမော်တော်ကားစက်မှုသုတေသန Lab မှ Teleperformance CX အပေါ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဒေတာများ
Tuzla Kart5။ Race ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလားခွကေို
ZES သုညထုတ်လွှတ်မှုအတွက်၎င်း၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု Continues
မစ်ဆူဘီရှီ Motors က 46 ။ တိုကျိုမော်တော် Show မှာလျှပ်စစ် Mini ကို SUV ကား Concept ကိုကားကမ္ဘာ့ဖလားမြှင့်တင်နိုင်ရန်
Karim က Habib ကေအိုင်အေရဲ့ဒီဇိုင်းစင်တာအကြီးအကဲခန့်အပ်ခဲ့သည်
ကျနော်တို့Cup'ışalသည့် NISSAN စပွန်ဆာသဘောပေါက်ခဲ့သလား Doruk စိတ်လှုပ်ရှားပင်လယ်ပြင်ပွဲတော်၌ရှိ၏
T-Car တွင်ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားလျှပ်စစ် tragger ပြင်းထန်သောအကျိုးစီးပွား Teknofest နှုန်းခဲ့သည်
Uber, နေ့ပေးဆောင် Start မှတက္ကစီမောင်းသူ